6061 Aluminum 3Mugore X 5in Rosin Plates Set pamwe Heaters Controller Heavy Duty Rosin Press Kit hunyambiri controller katuriji Heaters - China DongGuan Amoni Hardware
6061 Aluminum 3Mugore X 5in Rosin Plates Set pamwe Heaters Controller Heavy Duty Rosin Press Kit hunyambiri controller katuriji Heaters
Dambudziko guru pamwe kudzvanya rosin ndiyo mari michina. Kutoti wako achida nepavaigona kubva duku yakawanda nebwe uchishandisa bvudzi straightener, kuenda yako kupedza imwe nembiri shoma. Ndaona yakawanda michina zvikuru kuenda nezviuru zvemadhora, asi kupedzera kuti zvikuru wouldn`t nomusoro kana kumhanya kwako bhizimisi.
Kana vako vanofarira kugadzira zvimwe rosin zvakanaka goho guru kwako kuenda vanoda zvinhu zviviri:
Kana Kupfuurira rosin, zvishoma kupisa kunodiwa panguva dzakakwirira nematambudziko, zvichireva iwe anenge chando venhau rosin anogona, kana une kodzero michina. Asi, anoita tsvimbo kuti manyorero pano. I`m kuda kukuratidza zvaungaita kuti yako DIY Rosin Press yambosvitsa $ 500.
Ndiko rworudyi, muchina wokudhinda kuti anogona mundiro kubva 12,000lb pakati kumanikidzwa pamwe tembiricha Kudzorwa vakawanda unobereka! Kupfuura zvose, izvozvo chete zvinotora maminitsi mashoma kuti akamisa uye kushandisa.
Let`s vanotarisana nazvo, kudzvanya Rosin ndiyo nzira yakanakisisa kuzvimbandidzira zvose facial kubva Cannabis. Nokushandisa kupisa uye kumanikidzwa dzokubvisa nebwe kubva miriwo (chirimwa nyaya), munhu anogona richabereka zvimwe yepamusoro nebwe.
Dambudziko guru pamwe kudzvanya rosin ndiyo mari michina. Kutoti wako achida nepavaigona kubva duku yakawanda nebwe uchishandisa bvudzi straightener , kuenda yako kupedza imwe nembiri shoma. Ndaona yakawanda michina zvikuru kuenda nezviuru zvemadhora, asi kupedzera kuti zvikuru wouldn`t nomusoro kana kumhanya kwako bhizimisi.
High kumanikidzwa - kanenge 500lb kuti 1,000lb (matani 2+ vaifarira)
Heat - 150 ° F kusvika 350 ° F (200 ° F nzvimbo)
Kana Kupfuurira rosin, zvishoma kupisa kunodiwa panguva dzakakwirira nematambudziko, zvichireva iwe anenge chando venhau rosin anogona, kana une kodzero michina. Asi, anoita tsvimbo kuti manyorero pano. I`m kuda kukuratidza how you can make your own DIY Rosin Press for less than $500.
Kuvaka rig ichi zvaunongoda maviri zvigadzirwa nyore:
Double Rosin Press Plates Kit Heavy Duty Dual Controller Box pamwe Wired Heating Rod
6-tani Hydraulic Shop Floor Press pamwe Press Plates uye H Frame
Kana wako kwete nehana yakakwana asi, anorega kuyambuka mashoko vaviri. Uyewo yakanakisisa nzira nokuda kwerubwinyo rwakagara rwuripo kudzvanya rosin mabhisikiti kuti yepamusoro terpenoid goho.
A simba nhanhatu savi wokudhinda muNzvimbo yakasimba H-pepuranga. Super simba uye nyore kuvaka Ndiko nyore kuisa. The divi njanji mwena inokubvumirai chinja nekubata nzvimbo. Kunosanganisirawo 2 wokudhinda ndiro, kuzvishandisa! Ivo achadzivirira yenyu kudziyisa kwamahwendefa. Aine zvachose kurema 60lb, unogona zvakachengeteka crank kubva matani 6 kumanikidzwa, nzira kupfuura uchada.
Heat pehurumende Press Plates
0 ° F kusvika 415 ° F mumaminitsi !, idzi rinorema basa ndiro vanogona rumwe kuti zvakakwana kupisa uye kutsungirira kusvika 8000psi. Kupfuura zvose, mahwendefa vanotsamwira kuti tembiricha kurudyi pamwe wemagetsi kudzora bhokisi! Unofanira don`t kuva jerk famba pamwe kubika ndiro, kana kushandisa akarova romoto akaita dzimwe nemichina.
Kana wakambokurukura chakatsindirwa rosin pamberi, iwe unofanira kuva pfungwa tsvarakadenga yakanaka zvokuita uye sei nyore ndiko kushandisa. Kuvaka kwako wokudhinda achaponesa uve tani Mari uye kushanda pamwe kana asina nani pane dzimwe nemichina kuti vari kaviri mutengo.
1.Plug uye kutamba 5 "x3" platen akamisa. Tinoshandisa 6061 aruminiyamu nokuti chiedza, simba, uye ane rakaisvonaka kupisa kuchinjirwa, zvichiita hapana inopisa makwapa!
2.Dual nenharo ndiro, vose dzichidya chete kupisa zone.This ane vakaedza, rakaedzwa, nekusimba magadzirirwo nemigumisiro yakanaka mumazana zviitiko. Takaona kwaedzwa vaviri dzakawanda, pamwe hapana goho nani kana unhu pamusoro hunyambiri controller.
3.Fully yakarurama tembiricha zvichiongororwa kubva 0-300F zvakanaka. Kupisa Switch yedu drills zvakananga kupinda matete, kukupai chaiwo wechokwadi platen tembiricha.
5.Made kuti aenderane chero hydraulic wokudhinda matani 20 ane gondohwe 2 "dhayamita zvichidzika.
Kubhururuka mahwendefa edu muchisviniro chako rwokusarudza kwakafanana nyore sezvo tightening vaviri vakaisa screws (hex makiyi zvaisanganisira) angonanga gondohwe. Setup anotora zvishoma pane maminitsi 5!
6.Reach kwenyu tembiricha ada mumaminitsi asingasviki 10 edu simba 500w katuriji kudziyisa zvinhu.
7.The Plates anogona kubhadhara pachavo mukati okutanga maawa mashoma yemataurire!
Mbuva iyi zvinosanganisira:
Digital controller wired that maviri 500w katuriji kudziyisa zvinhu
Hex kiyi kugomo ndiro dzako muchisviniro chako rwokusarudza
One Year Full Warranty pamusoro Electronics dzako